Qoyska Almas Elman oo dalbaday in baaritaanka socda lagu daro dowladda Canada | HalQaran.com
Almaas Elman iyo Seygeeda Zakaria Hersi /Sawir hore/
Muqdisho (Halqaran.com) – Waxaa weli socdo baaritaan la xiriira dilkii Khamiistii loo gaystay Allaha u naxariistee Almaas Elman, qoyska gabadhaasi ay ka dhalatay ayaa waxa ay soo jeediyeen dalab.
Qoyska Almaas Elman, ayaa waxa ay dalbadeen in baaritaanka socdo lagu soo daro dowladda Canada, maadaama Almaas ay haysatay dhalashada dalka Canada.
Sidoo kale, waxa ay sheegeen qoyska in la joojiyo hadalada kala duwan ee Warbaahinta iyo Baraha Bulshada lagu hadal haayo ee dilka gabadhooda la xiriira.
Dowladda Soomaaliya iyo Amisom ayaa sheegay inay sameynayaan baaritaan lagu ogaanayo cidda ka dambeysay dilkii loo gaystay Almaas Elman oo Khamiistii xabad aan la ogeyn cidda soo riday kula dhacday Xerada Xalane.
Marxuumad Almaas Elman xilligii ay xabada ku dhaceysay ayaa waxa ay ka soo baxday shir Xafiiska Midowga Yurub ee Xalane, waxaana ay ku sii socotay dhanka Garoonka Aadan Cadde, si ay ugu laabato Magaalada Nairobi oo ay ka timid.
Si kastaba, baaritaan horudhac ah oo Amisom ay sameysay, ayaa lagu sheegay xabada dishay Almaas inaysan ka dhex dhicin xerada Xalane, balse baarista ay sii wadayaan Amisom.
AMISOM oo natiijo hordhac ah soo saartay
baaritaanka dilka gabadhooda
in lagu daro canada
Qoyska Almaas Elman oo dalb soo jeediyay